I-Inbox Enobunye Yenza Ukuphatha Ukuxhumana ku-PMS Yakho Kulula
Izici » Ibhokisi lokungenayo elihlanganisiwe
Ukuxhumana kwezivakashi kungaba umthwalo ukugcina ithrekhi yakho, njengoba inkampani yokuqasha iholide ingaba namalungu amaningana ezisebenzi eziphethe ezokuxhumana zezivakashi. Ngakho-ke, umuntu oyedwa angaphendula esicelweni futhi wonke umuntu oseqenjini kufanele aziswe.
Ngaphezu kwalokho, ukuxhumana kungahlala kwenzeka emapulatifomu amaningi - iselula ephathekayo yokuthumela imiyalezo, umphathi wesiteshi olawula ukuxhumana kweziteshi ezithile kepha hhayi ezinye, nelilodwa noma inombolo yamabhokisi okungenayo e-imeyili asebenzisa abahlinzeki abanjengo Gmail.
Ukuqinisekisa ukuthi ama-VA nabasebenzi bakude bayakwazi ukuthumela nokuthumela imiyalezo kuyinselele yayo uqobo. Ngaphezu kwalokho, ukushintsha njalo phakathi kwamapulatifomu ukufunda nokuphendula ukuxhumana kwezivakashi kungaba yisidina. Ibhokisi lokungenayo eliguquguqukayo, elihlangene liyadingeka.
Lingasiza Kanjani Ibhokisi Lemilayezo Engenayo Ebumbene?
I-Zeevou Chat ikuvumela ukuthi ungenise onke ama-imeyili akho, noma ngabe avela ku-OTA futhi ahlobene nokubhukha, noma ngabe uphenyo olujwayelekile mayelana nezinsizakalo zakho ezivela kumnikazi. Lokhu kusho ukuthi lonke iqembu lakho lingafinyelela kuyo yonke imilayezo nama-imeyili asuka endaweni eyodwa emaphakathi kubhokisi lokungenayo elihlanganisiwe.
Ukubhuka ngakunye kuqukethe nelogi yanoma yikuphi ukuxhumana (noma ama-imeyili noma ama-SMS) ahlobene nakho. Lokhu kukuvumela ukuthi ugcine ithrekhi yentambo yengxoxo nalesi sihambeli esithile, futhi ungangeza amanothi ekubukweni okufanayo ngezinhloso zangaphakathi.
Ama-Inboxes enzelwe wonke amalungu abasebenzi, noma yiliphi iqembu elenziwe ngaphakathi kweZeevou, nakuwo wonke amagama owasebenzisayo ukumaketha izindawo zakho. Lokhu kunikela ngezinga eliphakeme lokuguquguquka ekuqinisekiseni ukuthi uphawu lwakho kanye ne-form of formally oyifunayo kuyabonakala kuma-imeyili aphumayo, nokuthi kunokuhamba okulula kokuxhumana kwabantu abanezivakashi kanye namaqembu angaphandle.
Lapho ukubhuka kufinyelela khona ku-Zeevou, noma ngabe kuvelaphi, isivakashi sithunyelwa i-imeyili yesiqinisekiso sokubhukha ezenzakalelayo njengengxenye ye ukucubungula okuzenzakalelayo. Isimenywa sitshelwa ukuthi sifake ikheli laso le-imeyili, futhi kusukela lapho kuya phambili wonke ama-imeyili athunyelwa kukheli le-imeyili langempela.
Njengoba kunikezwe ukuthi iZeevou Chat ilawula ukuxhumana kwesiteshi, kanye nezivakashi namanye ama-imeyili futhi imiyalezo, kuvumela amaqembu ukuthi axhumanise ngempumelelo ukuxhumana kwawo kusuka endaweni eyodwa emaphakathi kubhokisi lokungenayo elihlanganisiwe.